I-Ballerina Olga Kuraeva iveza iimvakalelo ngeentshukumo zomdaniso obuthathaka | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Abadanisi basebenzisa imizimba yabo njengezixhobo ezifanelekileyo, benxibelelana neengcinga kunye neemvakalelo ngokuhamba. Intoni Olga Kureva Ucacisa kwi-Instagram, kunye naye umdaniso "Hayi ifilosofi, ayingomsebenzi"kodwa indlela yoku bonisa imvakalelo. I-Kuraeva kwi-Instagram iphuphuma ngamandla kunye nobabalo lomfazi omncinci, iifoto ezintle yomzimba wakhe ohambayo obalisa amabali anomdla.
IKuraeva danisa kunye IBolshoi Ballet Academy, Esinye sezona zikolo zakudala zoqeqesho lwe-ballet. Uchithe ixesha elininzi kunye nomzamo wotyalo-mali kuphuhliso lwakhe njengomculi kunye nomdanisi. Iifoto ezintle ozithathileyo ziyabonakala Alexander Yakolev Ukuhamba. Umdanisi uyavuma ngokukhetha ukufota kunye nevidiyo, ngokuchaseneyo nokusebenza eqongeni, ngenxa yethuba alinike ithuba lesibini kunye nokukwazi kwelensi ukubamba iimvakalelo. Umfoti u-Alexander Yakolev ngulowo ocola u-Olga.
Ucacisa ukuma kwakhe kukungafihli into ayifunayo kubugcisa bakhe: Andinguye umdlali weqonga. Ukuba andizukuhambisa imvakalelo ethile, andizukuyiveza ngomdaniso. Ayinamsebenzi ukuba ndidanisa kakuhle okanye hayi, eyona nto ibalulekileyo kukuba ndiyinyani «.
Umdaniso wam ayiyiyo ifilosofi okanye umsebenzi, yindlela endidlulisela ngayo ngokwasemphefumlweni. Andinguye umdlali weqonga. Ukuba andizukuhambisa imvakalelo ethile, andizukuyiveza ngomdaniso. Ndifunde umdaniso kwiBolshoi Ballet Academy ebuntwaneni bam, ebutsheni bam nakwangoku, kodwa andinazo izithixo zebhaleyi. Ndiphefumlelwe kakhulu ngabantu abenza imidlalo egqithileyo. Ndicinga ukuba banesibindi kwaye banamandla kakhulu emphefumlweni. Ikhamera iyakwazi ukuthatha iimvakalelo zokwenene kunye ezinzulu. Ndizibona ndikhula kolo hlobo kwixesha elizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Ballerina Olga Kuraeva uvakalisa iimvakalelo ngeentshukumo zomdaniso obuthathaka